Ciyaartoyda kooxda Juventus oo isku dayaya inay ku qanciyaan Paul Puppa dib ugu soo laabashada Bianconeri – Gool FM
Ciyaartoyda kooxda Juventus oo isku dayaya inay ku qanciyaan Paul Puppa dib ugu soo laabashada Bianconeri
Dajiye July 18, 2018
(Juventus) 18 Luulyo 2018. Sida ay shaacinayaan saxaafada dalka Talyaaniga saaxiibada hore Paul Pogba ee kooxda Juventus ay xiriir joogta ah la sameeyaan laacibka reer France si ay ugu qanciyaan inuu ka dhaqaaqo Manchester United, isla markaana uu dib ugu soo laabto Bianconeri.
Wargeyska “Totsport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday In Pogba lala xiriirinayo dib ugu soo laabashada kooxda reer Talyaani kadib imaatinka Cristiano Ronaldo.
Xidigaha Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini iyo Paulo Dybala ay dhamaantood wada xiiseenayaan inuu dib ugu soo laabto Bianconeri xili ciyaareedka cusub.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri uu si aad ah ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka Pogba, wuxuuna si weyn u soo dhaweenayaa dib ugu soo laabashada kooxda hadii ay suuragal tahay in markale ay maamulka dib u soo celiyaan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Blaise Matuidi, oo kaga garab ciyaaray Paul Pogba Koobkii Adduunka ee 2018, ayaa u sheegay inuu doonayo inuu mar kale kala ciyaaro Bianconeri.
“Waa inaad halkaan timaadaa, waa inaad markale nala midowdaa”.
Taageerayaasha Napoli oo weerarkii ugu horeeyay ku qaaday Cristiano Ronaldo! (Ma rumaysan doontid waxa ay sameeyeen)!
HALIS: Alex Oxlade-Chamberlain oo seegaya in ka badan kala bar xili ciyaareedka cusub